Ciidamada Muslimiinta Oo Dagaal La'aan Lawareegay Sedax Deegaan oo Sh/Hoose Katirsan
Maamulka 'Galmudug' oo yeeshay madaxweyne Cusub.
Dhageyso: Xalqada 11aad ee Barnaamijka Dhulkii Awoowayaasheen Yaa soo dhicin doona?.
Trump oo ku dhawaaqay Qorshihii laga filayay ee ahaa in dalka Falasdiin uu siiyo Yahuudda.
Mareykanka oo helay Meydadka 2 Askari oo uga dhintay diyaaraddii Afghanistan loogasoo riday.
Weeraro Askar iyo Saraakiil lagu dilay oo ka dhacay Gedo iyo Sh/Hoose.
Thursday July 03, 2014 - 18:00:25 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya isbedello dhanka maamulka ah ay ka jiraan deegaanno gobolkaasi katirsan.
Ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga shabeelaha hoose ayaa dagaal la’aan la wareegeen deegaanno kaabiga ku haya Buurhakaba ee Bay iyo Leeg,ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in ciidamada muslimiinta ay saldhigyo ka sameysteen deegaanada kala ah Jiira-kuuloow,Qardho iyo Jamaaco.
Maleeshiyaad taabacsan Dowladda Federaalka oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa wadada laamiga ah ee xiriirisaBalidoogle iyo Buurhakaba ayaa deegaanadaasi isaga baxay,boqolaal katirsan ciidamada jabhadaha shabaabul mujaahidiin ayaa ku baxay wadada laamiga ah kadibna maleeshiyaadkii isbaaralayda ahaa ayaa dhanka Leego u baxsaday sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Taliyaha ciidanka DF-ka ee Leego ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay kasoo baxeen sedax deegaan wuxuuna arrinkaasi ku macneeyay xeelad dagaal iyo gurmad ay ka waayeen ciidamada AMISOM ee Leego.
Dad socota ah oo kusoo safray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo ayaa sheegay in ay arkayeen ciidamo shabaabul Mujaahidiin katirsan oo gaadiidka shacabka baaraya.
Qarax Khasaara dhaliyay oo ciidamada dowladda lagula beegsaday deegaanka Gololeey.